🥇 ▷ Skype iyo Cortana: Sidoo kale Microsoft waxay u oggolaataa maqalka bini-aadamka in la qiimeeyo ✅
Skype iyo Cortana: Sidoo kale Microsoft waxay u oggolaataa maqalka bini-aadamka in la qiimeeyo
Ku socota Amazon. Apple iyo Google ayaa iyaguna Microsoft sidoo kale dhaleeceeyay si ay u oggolaadaan fikradda codbixinta ee dadka isticmaala si ay u falanqeeyaan. Weydiinta weydiimaha kaaliyaha luuqada Cortana sidoo kale waa in loogu talagalay wada hadalka Skype waa la adeegsadaa haddii lagu ilaaliyo turjumaanka KI.
Rikoodhyo maqal ah ayaa dadku dhegeysanayaan
Warbixintaas Kuxigeenka iyo rafcaan ka qaadashada wadahadalada adeeg bixiyaha kaasoo bixiya duubista codka maqalka ee Microsoft si loo falanqeeyo. Eedeymaha waa kuwa lagu kalsoonaan karo maxaa yeelay waxaa lagu sharxi karaa shaashadaha iyo duubista, sidaa darteed Kuxigeenka,
Sida shirkadaha kale ee teknolojiyadda, Microsoft ma bixiso wax macluumaad ah oo shakhsi ah adeeg bixiyaha, laakiin magacyada, cinwaannada ama macluumaadka kale ee shaqsiyadeed sidoo kale waxaa laga heli karaa duubista kiiskan sidoo kale. The Kuxigeenka Rikoodh la heli karo ayaa sida caadiga ah u dhexeeya shan illaa toban ilbiriqsi, laakiin sidoo kale waxaa jiri doona duubis dheeri ah, sida laga soo xigtay bixiyaha adeegga.
Ka hadalka Microsoft ee ku saabsan Tafsiirka ‘Skype’ waa la gooyn karaa oo la falanqayn karaa waxaa laga heli karaa Su’aalaha la isweydiiyo ee ku saabsan dalabka, kaas oo, si kastaba ha noqotee, in Jarmalku yahay kaliya tarjumaad aad u xun.
Markaad isticmaaleyso tarjumaadda Skype ee muuqaalada Skype waxay aruurineysaa oo u isticmaashaa madadaalada si loo horumariyo badeecada iyo adeegyada Microsoft. Baro tarjumaadda iyo Teknolojiyadda Aqoonsiga Hadalka Halkaan waxaad ku baran doontaa, kuna kori doontaa, lafa guri doonaa jumladaha iyo diiwaangelinta otomaatiga ah iyo dhammaan sixitaannada lagu geli doono nidaamkeenna si loo abuuro adeegyo ka sii xoog badan. Si loo ilaaliyo asturnaantaada, wada hadalka loo isticmaalo in lagu hagaajiyo badeecada waxaa lagu gartaa tilmaamo alifbeetiyaal ah oo kaqeybgalayaashu aysan u aqoonsan madadaalo.
Wadahadallada waxaa la duubi karaa oo keliya marka sifooyinka tarjumaadda uu adeegsado uu doorto isticmaale.
Xaqiiqda ah in Microsoft aysan u oggolaan in duubistaas lagu falanqeeyo mashiinno laakiin dadku ma aha in laga helo Wax Weynaha – laakiin lama soo koobi karo.
Xitaa iyada oo la adeegsanayo ‘Cortana Microsoft’ ma qarinayso in amarrada cod ee la galiyay lagu hagaajiyo adeegga “loo adeegsaday“Waxay ka tagaysaa howsha la taaban karo oo ay ka mid tahay u gudbinta duubitaannada la siinayo bixiyeyaasha adeegga laakiin mugdi ahaan.
Markaad la hadlaysid Cortana si aad u weydiisatid, u qeybsatid, ama u shaqeyso xirfadaha, Microsoft waxay u adeegsaneysaa macluumaadkaaga codka si loo wanaajiyo fahamka Cortana ee luqaddaada iyo jawaabahaaga. Tani waxay sidoo kale khusaysaa alaabada iyo adeegyada kale ee Microsoft ee adeegsada ictiraafka hadalka.
Meelaha gaarka ah ee loogu talagalay koontada Microsoft, Microsoft ayaa markaa ka hadleysa ururinta iyo keydinta duubista codka waxayna u oggolaanaysaa dadka isticmaala inay arkaan iyo tirtiraan taariikhda.
Microsoft wali waxay u aragtaa howsha mid hufan
Microsoft waxaa loola jeedaa qaabkeeda Kuxigeenka si hufan, sirta adeegsadaha had iyo jeer waxay safka hore ku jirtaa oo kaliya ogolaashadiisa kaydinta iyo falanqaynta ayaa dhici doona. Si kastaba ha noqotee, shirkaddu waxay sii wadi doontaa inay dib u eegto nidaamka si ay u siiso isticmaaleyaasha macluumaad adag oo ilaalin ah. Microsoft ayaa ku sii jirta habka hadda jira, waa in laga saaraa.
Google wuxuu leeyahay qiimeynta bini aadamka ee duubista Google Assistant Waqtiga la joogo, kuwa galaya taleefannada casriga ama Google Home inta lagu gudajiro weydiimaha Caawinta Codadka waa la joojiyaa waqtigaas; isku mid ayaa quseeya qiimeynta aadanaha ee amarada Apple Siri. Markaana Amazon ayaa tarjumaadda aadanaha ee wax soo saarka Alexa ee mustaqbalka ay khilaafsan tahay goobaha.